Ndi nyocha njirisi nyochaa gbanwee ya?
Ọ bụghị ihe nzuzo nye onye ọ bụla na ahịa ahịa dijitalụ dị ukwuu nke na-agbanwe ma ọ kaghị aka. N'ime afọ ole na ole gara aga, Google emeela mgbanwe dị ukwuu na ogo algorithms ya. Ezigbo nzube nke mgbanwe ndị a bụ iji melite ahụmịhe onye ọrụ na weebụsaịtị ndị na-etinye na TOP. N'oge a, Google na-aghọwanye nkọ ma nwee ike nyochaa njirimara weebụsaịtị site na ọnụ ọgụgụ nke ihe. Ọ bụ ya mere isiokwu nke nyocha njirimara search engine bụrịrị ihe dị elu. Iji nweta ọkwá dị elu, ị ga-emejuputa usoro niile kachasị mma search engines nke na-echebara ma ọpụpụ- na njikarịcha na saịtị. N'isiokwu a, anyị ga-atụlee otú Google algorithm mmelite si emetụta ndị ahịa na-eji usoro iwu SEO na-esi zọpụta ọnọdụ saịtị ma ọ bụrụ na iwu nke SEO ga-agbanwe.
Ogidi njikwa njikwa search engine
Ndị ọkachamara SEO niile kwenyere na e nwere otu ihe na - enweghị agbanwe na njirimara kachasị mma - ogo ọdịnaya. Ọ bụrụ na ị na-emepụta ọdịnaya dị elu, nke na-enweta njikọ dị mkpa site na ngalaba ndị ọzọ nwere ikikere, saịtị gị ga-abụ TOP n'okpuru ọnọdụ ọ bụla. Otú ọ dị, usoro iji melite nọmba na ogo nke njikọ ndị na-abanye na-abịa n'oge. Ugbu a, ịkwesịrị ịmepụta mgbasa ozi nkwado gị na-elekwasị anya na isi ihe atọ - ọdịnaya ọdịnaya, mgbasa ozi mgbasa ozi, na njikọ ụlọ. Iji nweta mmelite kachasị elu na ọkwa, ịkwesịrị ikpokọta akụkụ a kachasị mma.
N'oge a, ọdịnaya aghọwo ihe dị mkpa n'etiti ndị na-ere ahịa n'Ịntanet mgbe Google malitere ịmepụta ihe dị mma na ihe ntinye ederede.Iji meziwanye ebe nrụọrụ weebụ gị, ịkwesịrị ịmepụta na-ebuli elu ma na-etinye ọdịnaya na ihe dị mkpa n'arụ ahịa gị. Jide n'aka na ị na-etinye mkpụrụ okwu ọchụchọ n'ime ọdịnaya gị dị ka akara ala nke SEO definition. Ọzọkwa, ịkwesịrị ịmepụta ọdịnaya gị nke ọma site na iji bullets, paragraf na ndepụta aha. Google na-adabere ogologo ma dị mma ọdịnaya karịa obere na ìhè.
Ngwakọta njikọ organic
Ngwakọta njikọ bụ atụmatụ dị mkpa maka nyochaa ebe nrụọrụ weebụ nke nwere ike ịmepụta ma ọ bụghị akụkụ ahụ. Ụlọ njikọ ụlọ SEO ma ọ bụ na-acha ọcha-na-ezo aka n'inweta ihe njikọ njikọta na saịtị site na ntinye nke ntinye ederede, njikọ njikọ, na mbipụta isiokwu. Oghere na-abụghị organic ma ọ bụ nwa ojii SEO bụ maka njikọ ịzụta ma jikọta ọrụ ugbo. Ọ bụ ụzọ dị mfe iji dọta ndị ọrụ. Otú ọ dị, ọ dị gị mkpa ịghọta na ndị ọrụ na saịtị gị site na ịzụta njikọ nwere ike ghara ịghọ ndị ahịa gị. Ọzọkwa, a na-agba ụdị ụdị ọkpụkpọ ojii a site na search engines ma nwee ike imerụ ọkwa gị. Ị ga-enweta njikọ site n'aka nkwado kama ịkwụ ụgwọ maka ha.
Ikwesiri iburu n'uche na otu ụzọ nke ịtinye ederede bara uru bara uru na ntanetị nwere ntanetị ọ bụla bara uru n'eziokwu kachasị mma. Google nke oge a na-emeso njikọ edere arịlịka na mgbasa ozi na mbipụta ndị ọzọ dịka njikọ na-adịghị ekwekọ ma ọ bụ ụgwọ. Google ga - achọ ịkwụsị njikọ njikọ na - ekwekọghị n'okike site na nkesa mgbasa ozi. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ndị ọzọ na-echekarị na ndị isi na-ede banyere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị ma tinye njikọ dị mkpa na ya, mgbe ahụ, a na-ewere ya na ọ bụ Google.
Nnọkọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya
Na njedebe ikpeazụ nke mgbasa ozi mmeri kachasị mma bụ mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze. N'oge a, ọtụtụ ndị ọzọ na-abịa na ebe nrụọrụ weebụ site na mgbasa ozi mgbasa ozi na-ahọrọ ka ha nweta ozi na ụdị mara mma ma na-ahụ anya. Iji meziwanye njirimara akara gị, o doro anya na ị ga-enwe ezigbo mmekọrịta mmadụ na ibe gị. Ọ ga - enyere gị aka ịbịarukwu ndị ahịa gị aka ma ghọta mkpa ha Source .